Football Khabar » क्रिस्टल प्यालेसको पोस्टमा लिभरपुलले ठोक्यो ७ गोल !
क्रिस्टल प्यालेसको पोस्टमा लिभरपुलले ठोक्यो ७ गोल !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलले १४औं साताको खेलमा फराकिलो जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले १२औं स्थानको क्रिस्टल प्यालेसलाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–७ को पराकिलो अन्तरको नमिठो हार खुवायो । अवे मैदानमा लिभरपुललाई जिताउन ५ जना खेलाडीले गोल गरे, जसमा रोवर्ट फर्मिन्हो र मोहमद सालाहले २–२ गोल गरे ।
सुरुआतबाटै लिभरपुलले एकपक्षीय बनाएको खेलमा पाहुना टोलीका लागि खेल सुरु भएको ३ मिनेटमै ताकुमी मिनामिनोले गोल गरेका थिए । त्यसपछि ३५औं मिनेटमा साडियो मानेले सुन्दर गोल गरे । फेरि खेलको ४४औं मिनेटमा फर्मिन्होले गोल थपेपछि लिभरपुलले पहिलो हाफमा ०–३ को सहज अग्रता बनायो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा पनि लिभरपुलले घरेलु टोलीमाथि उस्तै दबाब बनाएर खेल्यो । खेलको ५५औं मिनेटमा कप्तान जोर्डन हेन्डर्सनले गोल गरेर लिभरपुललाई फराकिलो जिततर्फ अघि बढाएका थिए । त्यसपछि ६८औं मिनेटमा फर्मिन्होले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि लिभरपुल खेलमा ०–५ ले अघि रह्यो । फर्मिन्होले कठिन एंगलबाट सुन्दर गोल गरेका थिए ।
लिभरपुल त्यत्तिमै अडिएन । यसपटक खेलको ८१औं मिनेमा मोहमद सालाहले बक्स भित्रबाट हेडिङमार्फत् बललाई सुन्दर ढंगले जाली चुमाएपछि लिभरपुलको अग्रता ०–६ मा पुग्यो । कर्नर किकबाट आएको बल म्याटिपले हेडिङमार्फत् दिएको पासमा सालाहले चलाखीपूर्वक बललाई पोस्टको दिशा दिएका थिए । पहिलो गोल गरेको ३ मिनेटपछि नै सालाहले बक्स बाहिरबाट दर्शनीय गोल गरेपछि खेल लिभरपुलले खेल ०–७ ले जित्यो ।
अब यो जितपछि लिभरपुलले १४ खेलबाट कूल ३१ अंक जोडेको छ । उसले एक खेल कम खेलेको दोस्रो स्थानको टोटनह्यामलाई ६ अंकले पछि छाडेको छ । यसअघि लिभरपुलले टोटनह्यामलाई हराएर शीर्ष स्थानमा ३ अंकको अगता बनाएको थियो । त्यसअघि लिभरपुल र टोटनह्याम दुवैको समान अंक थियो ।
प्रकाशित मिति ४ पुष २०७७, शनिबार २०:१३